XOG:- Kulan qaas ah oo ay Villa Soomaaliya ku yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh iyo Yuusuf Dabageed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Kulan qaas ah oo ay Villa Soomaaliya ku yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh iyo Yuusuf Dabageed
Ilo lagu kalsoonaan karo aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa inoo sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha gobalka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ay habeenkii xalay kulan albaabada u xiran halkaasi ku yeesheen.
Kulankaasi oo ahaa mid qaas ah ayaa waxa uu ku saabsanaa xalinta khilaaf soo kala dhex-galay labadaasi mas’uul, kuwaas oo isku khilaafay aragtida ku aadan arrinta maamul u sameynta maamulka gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa mudooyinkii ugu dambeeysay ka mid noqday mas’uuliyiintii sida weyn u mucaaraday shirka dhismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ee haatan ka socda magaalada Jowhar.
C/risaaq Cumar Maxamuud oo ah wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu isaga ka dambeeyay kulanka habeenkii xalay ay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ku yeesheen labadaasi mas’uul.
Kulankaasi ayaa la sheegayaa in labada dhinac ay heshiis ku gaareen, waxaana warar hoose aynu helnay ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh uu balan-qaad u sameeyay Yuusuf Dabageed, kaas oo ah inuu xilka guddoomiyaha gobalka Hiiraan sii heyn doono xitaa marka lasoo dhameystiro dhismaha maamul gobaleedka Hirshabeele.
Ugu dambeyntii, Yuusuf Dabageed oo hadalka madaxweyne Xasan Sheekh si weyn ugu qancay ayaa lasoo sheegayaa inuu maanta ku wajahan yahay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, si uu ugu biiro howlaha lagu dooranayo madaxweynaha maamul gobaleedka Hirshabeele oo la filaayo inay dhawaanahaan halkaas ka dhacdo.